UJuan Tranche. Ukuxoxisana nomlobi we Spiculus | Izincwadi Zamanje
UJuan Tranche. Ukuxoxisana nomlobi weSpiculus
Izithombe: UJuan Tranche. Iphrofayili ye-Twitter.
UJuan Tranche Ngibe semkhakheni wokushicilela isikhathi esithile, ngentshisekelo ethile futhi ngigxile esifundweni se- IRoma lasendulo nezwe lakudala. Manje lapho eseqedile waya emakethe ngenoveli elandisa indaba ye-gladiator eyingqayizivele, Ama-spicules. Ngisazisa kakhulu isikhathi sakho, ukuzinikela kanye nomusa wakho ngalokhu ingxoxo lapho ekhuluma ngaye nangezinye izihloko eziningana.
UJuan Tranche - Ingxoxo
UMBHALO MANJE: Ama-spicules yinoveli yakho yokuqala ngohlobo lomlando. Usitshelani ngakho futhi umqondo wavelaphi?
Iminyaka Ngizwa into engachazeki ngomhlaba we-gladiator futhi uSpiculus wayengomunye wabahamba phambili zikhathi zonke. Kuhlale kungidonsela amehlo ukuthi wonke umuntu uzwe kanjani ngalaba balwi abashiya impilo yabo enkundleni, kepha akekho owaziyo ukuthi ngubani oke waba khona ngempela. Spartacus, odume kunabo bonke esikhathi sonke, wakwenza ukuhola ukuvukela kwezigqila, hhayi ngokuba yisilwi esihle. Emphakathini lapho sithanda ukukala impumelelo ngokunikeza imiklomelo nokuhlobisa cishe yonke into, okungenani ngikuthole kunelukuluku. Ngisebenzise ithuba idatha encane ukuthi sinaye ngaye nentshisekelo enginayo ngaleso sikhathi yokuyixoxa, hhayi indaba yakhe kuphela, kodwa futhi nokwethula lo mhlaba omuhle ovela esandleni sabangane ababili ababhekene eRoma yoMbusi uNero.
Incwadi yokuqala engiyikhumbulayo esikoleni kwaba umlando wePompeii utshele izingane lapho i-protagonist ibizwa ngokuthi uSofia. Leyo ncwadi yangimaka ngoba sikwazile ukuba nomhlangano nombhali. Ngaphandle kwesibopho sokufunda esigabeni semfundo, incwadi yokuqala engiyifunde ngesinqumo sami kwaba Izinsika zomhlaba. Ngithandile. Kusukela lapho angikaze ngiyeke ukufunda futhi ngizama ukusabalalisa uthando lwami kumadodakazi ami.
Mayelana nokubhala. Ukuphela kwento engiyibhalile empilweni yami yonke, ngaze ngathatha isinqumo sokuxoxa indaba kaSpiculus, babenjalo izincwadi zothando ngineminyaka eyishumi nanhlanu ongunkosikazi wami namuhla. Ngangingakaze ngibhale indaba, noma yini efana naleyo, kodwa ngiyethemba ukuthi angizukushiya lo msebenzi wokuzilibazisa osuphenduke inkanuko.
Ngizohlala nakanjani Ken follet ngoba izincwadi zakhe zingenze ngathanda inoveli yomlando. Futhi USantiago Posteguillo kulolu hlobo futhi, kunjalo, UJuan Eslava Galán, ngoba ngiyalithanda izwe lamaRoma ngenxa yezincwadi zalo. Kwezinye izinhlobo engizithandayo, njenge-thriller noma inoveli yobugebengu, ngiyazithanda kakhulu USantiago Díaz noCarmen Mola.
USila, umlingiswa ojwayelekile wenoveli Ama-GladiatornguRoger Mouge. Namanje ngisazibuza ukuthi lo mlingiswa wayezocabanga kanjani ezimweni ezahlukene noma wayezokwenza kanjani ngezimo ezihlukile. Yebo, ngiyazi ukuthi lokhu kuzwakala kungajwayelekile. Ngingathanda futhi ukudala, hhayi okuningi ukwazi, U-Alice gould umlingiswa ophambili we Imigqa kaNkulunkulu egwegwilenguTorcuato Luca de Tena.
Ohlangothini lokubhala, umculo we imisindo yemisindo njengoMax Ritcher, uHans Zimmer futhi njalo ngokwesimo engisakhayo. Futhi, ayisoze yalahleka ikhofi noshokoledi. Ngokuqondene nokufunda, akukho. Nginekhono loku ukuhlushwa okuphezulu kakhulu futhi akukhathaleki ukuthi kunomsindo ongizungezile noma amadodakazi ami aphakeme kangakanani, ithelevishini engingena kuyo lapho ngifunda.
Ukubhala, njengoba ngishilo, ebusuku nasetafuleni elisendlini yokuphumula. Ukuze ufunde Ngiyasithanda isihlalo esihlala egumbini lendodakazi yami, usofa osegumbini lokuphumula, igumbi lokulala, ikhishi, ithala. Ngokufigqiwe, anginankinga isayithi ngoba ngiyakuthanda ukufunda. Kepha, uma bekufanele ngihlale nomzuzu othile engingakhetha kuwo ehlobo, endaweni yokukhanda izando enomsindo wolwandle ngemuva.
Ngifunde cishe yonke into. Ngiyayithanda inoveli zomlando kanye noveli mnyama futhi ngikuhlanganisa ne- ukuziqhenya. Ngicabanga ukuthi okuwukuphela kohlobo engingakaze ngilufunde yinoveli yothando, kepha nami angikulahli.
Njengamanje ngiqeda nje: Asekho amahlathi ongabuyela kuwo, nguCarlos Augusto Casas, engangikuthanda kakhulu. Ngisanda kuqala ukufunda: I-alanonguJose Zoilo Hernández.
Ukubhala, ngiyaqeda inoveli yami yesibili kuthiwani nge- abesifazane be-gladiator.
Namuhla kunokuphakelwa okuningi kunakuqala futhi, ngenhlanhla, ungathenga izincwadi nganoma iyiphi intengo. Lezi yizindaba ezinhle ngoba zivumela isiko ukuthi litholakale kuzo zonke izabelomali nangakho konke ukuthanda. Kukhona namathuba okuthi phambilini abengekho ngenxa ye- ukuzishicilela lokho kuvumele ababhali bama-novice, ababone ngaphambilini ukuthi akunakwenzeka ukufeza iphupho labo, ithuba lokuhlela imisebenzi yabo. Ngizamile ngoba bengingenalutho engilahlekile nakho konke engizokuzuza futhi, ngaphandle kokungabaza, ngenze isinqumo esifanele kusukela lapho ngabhala Ama-spiculesKuyamangaza ukuthi kungicebise kangakanani.
Iqiniso yilokho angazi. Ama-spicules Kuvele nje ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ngakho-ke, bengazi lo mzuzu kuphela. Ngakho-ke konke engihamba nakho kuhamba kahle kakhulu. Uma lokho okuzayo kungcono, ngilangazelela ukukuphila.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UJuan Tranche. Ukuxoxisana nomlobi weSpiculus
UKen Follet: izincwadi